Programming Archives - A Programmer
Pair Programming အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း (အပိုင်း ၂)
အပိုင်း ၁ ကိုတော့ အောက်က link မှာသွားဖတ်လို့ရပါတယ်။ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814360095586703&set=a.487154271640622&type=3&theater အခုအပိုင်း ၂ မှာတော့ pair programming လုပ်ပြီဆို ကြုံလာဆုံလာရမယ့် အခက်အခဲ တွေနဲ့ ဘယ်လို မျိုး Pair လုပ်ရင် ဘာတွေအတွက်ကောင်းတယ် စသည်ဖြင့် ရေးပေးသွားမှာပါ။ စလိုက်ကြရအောင်။ Productive မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်တောင် တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ feeling မတူတာဖြစ်ပေမဲ့ pair programming မှာတော့ pair လုပ်ထားတဲ့ programmers တွေက အားလုံး စိတ်တူကိုယ်တူ နဲ့ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ…
Pair Programming အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း (အပိုင်း ၁)
developer တွေက အလုပ်လုပ်တဲ့ နေရာမှာ စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိ နေလို့ရှိရင် ပိုပြီးတော့ အလုပ်တွင်ပါတယ်။ စိတ်မပါရင် မပါဘူး၊ ပါရင်လည်း မပါဘူး တော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့နော် :3။ အလုပ်တွင်စေနိုင်မယ့် tools တွေ resources တွေရှိရင် ပိုပြီးတော့တောင် လုပ်ရကိုင်ရတာ မြန်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး efficiency ကို boost လုပ်နိုင်တဲ့ tatics တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းတွေထဲ ကမှ Pair Programming အကြောင်းလေးကို ကျနော်နားလည်ထားသလောက် ပြန်လည် sharing လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ps. အလုပ်နည်းနည်းများနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် စာသိပ်မရေးနိုင်သေးလို့ part ခွဲပြီးတင်ပေးပါမယ်။…
Why Programming. Programming ကိုဘာအတွက်ကြောင့် လေ့လာသင့်သလဲ။
အားလုံးသိတဲ့ အတိုင်းပဲ ဒီနေ့ခေတ် industries တော်တော်များများက tech နဲ့ မလွတ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘာအလုပ်လုပ်ပဲလုပ်လုပ် အနည်းနဲ့ အများ technology က ပါလာတာပါပဲ။ ဒီနေ့မှာတော့ programming ကိုဘာလို့လေ့လာသင့်သလဲ၊ coding ရေးဖို့တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ဘဲ တစ်ခြား ဘယ်အပိုင်းတွေမှာအရေးပါမလဲဆိုတာကို ရေးသွားမှာပါ။ programmer ဖြစ်ချင်လို့ programming သင်တာက make sense ဖြစ်သလို programmer မဟုတ်ဘဲတစ်ခြား နယ်ပယ် မှာ အလုပ် လုပ်နေတဲ့လူတွေ (eg.Digital industries ကလူတွေ)လည်း လေ့လာလို့ရပါတယ်၊ လေ့လာလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်၊…